नेकपा – Sudarshan Khabar
रक्तचाप बढेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल अस्पताल भर्ना
काठमाडौं,। पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ । एक्कासी रक्तचाप बढेपछि उहाँलाई बुधबार साँझ धुम्रबराहीस्थित ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना गरिएको नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले जानकारी गराउनुभयो । नेता खनालका स्वकीय सचिव कृष्ण भट्टराईलाई उदृढ गर्दै केन्द्रीय सदस्य रिजालले भन्नुभयो, “पूर्व प्रधानमन्त्री खनाललाई साँझ ४ बजे […]
सातादिन भित्रै एकता प्रक्रिया टुंग्याउने नेकपाका नेताहरू सहमत
काठमाडौ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को बाँकी एकता प्रक्रिया साता दिनमै टुंग्याउन नेताहरु सहमती नजिक पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दुई अध्यक्ष र महासचिवबीचको छलफलमा साता दिनभित्रै पार्टी एकताको बाँकी काम टुंग्याउने सहमति भएको हो । आज बिहीबार बालुवाटारमा नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेलबीच […]
अन्तत नेकपाकाे विवादले लियाे यस्ताे माेड के हाेला अब ? मान्लान त ओली र प्रचण्ड ?
काठमाडाैं , नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलले प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए। स्रोतका अनुसार कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा एउटा अध्यक्षले सरकार सञ्चालन गर्ने र अर्का अध्यक्षले पार्टीको काम सञ्चालन गर्ने […]